Satellite Shankar (2019) | MM Movie Store
အိန်ဒိယနဲ့ကကျရျှမီးယားအကွား တငျးမာမှုတှဖွေဈပွီးတော့အပွနျအလှနျပဈခတျေမှုတှဖွေဈနတေဲ့အတှကျရှတေ့နျးကစဈသားတှကေ အိမျကိုမပွနျနိုငျပဲဖွဈနကွေရပါတယျ…..အဲ့ဒီထဲမှာဂွိုလျတုရှနျကာလို့ချေါတဲ့ ရိုငျဖယျတပျသားတဈယောကျလဲအပါအဝငျပေါ့….
ကံကောငျးထောကျမစှာနဲ့သူတဈဦးထဲရှဈရကျအတှငျးအိမျပွနျခှငျ့ရသှားတဲ့အခြိနျမှာတော့သူ့တပျဖှဲ့ဝငျရဲဘျောရဲဘကျတှကေ သူတို့မိသားစုတှကေိုဝငျတှဖေို့အကူအညီတောငျးပါတော့တယျ…ဒီလိုပွနျတဲ့အခြိနျမှာ ရကျကလညျးနညျးနတေယျဆိုပမေယျ့အကူအညီတောငျးတာတှကေိုလကျခံလိုကျတယျ….
ဒါပမေယျ့ အိမျအပွနျလမျးဟာ သူထငျထားသလိုမခြောမှခေဲ့ဘူး….ဘယျလိုအခကျအခဲတှရေငျဆိုငျရမလဲ….အသကျဘေးကရောလှတျပါ့မလား….ဘယျလိုလူမြိုးတှကေရော သူ့ကိုရနျပွုကွမလဲ….
သူကရော အားလုံးပွလေညျအောငျ ဖွရှေငျးနိုငျပါ့မလား…IMDb…6.7 ရရှိထားတဲ့ India အကျရှငျကားမို့ ခံစားကွညျ့ကွပါဦး…
အိန္ဒိယနဲ့ကက်ရ်ှမီးယားအကြား တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပစ်ခေတ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကစစ်သားတွေက အိမ်ကိုမပြန်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြရပါတယ်…..အဲ့ဒီထဲမှာဂြိုလ်တုရှန်ကာလို့ခေါ်တဲ့ ရိုင်ဖယ်တပ်သားတစ်ယောက်လဲအပါအဝင်ပေါ့….
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့သူတစ်ဦးထဲရှစ်ရက်အတွင်းအိမ်ပြန်ခွင့်ရသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေက သူတို့မိသားစုတွေကိုဝင်တွေ့ဖို့အကူအညီတောင်းပါတော့တယ်…ဒီလိုပြန်တဲ့အချိန်မှာ ရက်ကလည်းနည်းနေတယ်ဆိုပေမယ့်အကူအညီတောင်းတာတွေကိုလက်ခံလိုက်တယ်….
ဒါပေမယ့် အိမ်အပြန်လမ်းဟာ သူထင်ထားသလိုမချောမွေ့ခဲ့ဘူး….ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ….အသက်ဘေးကရောလွတ်ပါ့မလား….ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကရော သူ့ကိုရန်ပြုကြမလဲ….
သူကရော အားလုံးပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား…IMDb…6.7 ရရှိထားတဲ့ India အက်ရှင်ကားမို့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး…